နိဒါန်း “ဆရာ” “ဗျာ” “ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်က ဘာလဲဆရာ” “ရှေ့နေနှင့် စာတမ်းများပါ” “ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆရာ” “ဖတ်ကြည့်ကြစို့”..
ခြစားမှုဟူသည် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအား ထိခိုက်စေသောကြောင့် ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံး၏ ရန်သူဖြစ်သည်။ ရေရှည်တည်တံ့သော စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု၊ ကျင့်ဝတ် ဆိုင်ရာစံတန်ဖိုးများနှင့် တရားမျှတမှုတို့ကို ခြစားမှုက ခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။ ခြစားမှုက လူ့အဖွဲ့အစည်းကို မတည်မငြိမ် ဖြစ်စေပြီး တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကို အန္တရာယ်ပြုလျက်ရှိသည်။ ခြစားမှုဟူသည် အင်စတီကျူးရှင်း များနှင့် ဒီမိုကရ..
အဂတိလိုက်စားမှု အဂတိလိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက ဆောင်ရွက်နေသည်။ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်း တိုးပွားလျက်ရှိသည်။ နည်းပညာများ အကူအညီပေးမှုကိုလည်း တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်နေသည်။ ဤနေရာတွင် ကုလသမဂ္ဂ၏ အခန်းကဏ္ဍကို သိရှိသင့်သည်။ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံက အဂတိလိုက်စားမှု ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး ကွန်ဗန်းရှင်းအတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းကိုလည်း လေ့လာအပ်ပေသည်။..
နိဒါန်း “ဆရာ” “ဗျာ” “စာမရေးတာ ကြာပြီနော်” “ဟုတ်တယ်၊ တိုင်စာတွေ များနေလို့” “ဘယ်လို” “ဒီလိုပါဗျာ”..
ရှေ့နေ ကျွန်တော်သည် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေနှင့် နိုတြီပဗ္ဗလစ်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်သည်ဆိုပါစို့။ ရှေ့နေတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့် တရားခွင်မျိုးစုံသို့ အမှုလိုက်ဖူးပါသည်။ တရားသူကြီးမျိုးစုံ (အဆင့်ဆင့်) ကြုံဖူးပါသည်။ အမှုစစ်၊ သက်သေစစ်၊ လျှောက်လဲချက်ပေး၊ တစ်ဖက်ရှေ့နေနှင့် ငြင်းခုံ၊ တရားသူကြီးအမိန့်ချသည်ကို နာခံ စသည် စသည်ဖြင့် တရားခွင် အတွေ့အကြုံ အတော်စုံခဲ့ပါသည်။..
နိဒါန်း " ဆရာ " " ဗျာ " " ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်က ဘာလဲဆရာ " " ရှေ့နေနှင့်လူမှုကွန်ရက်ပါ" " ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဆရာ " " ဖတ်ကြည့်ကြစို့ "..
Originally I did not intend to write this article, but people around me, friends and many others were talking about it. Media were writing about it. Cartoonists drew cartoons about it. My colleagues encouraged me to write about it and I happened to write about it. To tell you the truth, I am rather lazy to write such things apart from office letters. I just have to say it isabad habit...
အညွှန်းကိန်း အဂတိကင်းစင်ဖို့ အညွှန်းကိန်းများအကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က တင်ပြခဲ့ပါပြီ။ အဂတိအခြေခံက ဘာလဲ။ ဘာကြောင့် အဂတိဖြစ်ရသလဲ။ အဂတိလိုက်စားမှု၏ အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ဘယ်လိုဖွင့်ဆိုသလဲ။ လူ့လောကဓမ္မတာ အနေကြာခဲ့သော အဂတိတရားကင်းစင်ပါ့မလား။ ဘယ်လိုထိန်း ကြ မလဲ။ သရုပ်ခွဲကြပါစို့။..
အဂတိတိုက်ဖျက်ရေး အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရသူ တစ်ဦးအဖို့ အဂတိဟူသည် ဘာလဲ၊ အဂတိ၏ အဓိပ္ပာယ်၊ နောက်ခံသမိုင်း၊ အတွေ့အကြုံများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ အဆိုအမိန့်များ၊ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ စသည်ဖြင့် လေ့လာရမည်။ ပြည်သူ့အသံ နာခံရမည်။ မှတ်စုပြုရမည်။ ဆန်းစစ်ရမည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်။ ဤသို့ယုံကြည်မိသည်။ ထို့ကြောင့် စုစည်းတင်ပြပါရစေ။..
ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ အောင်ထွန်းသက် အရင်တစ်ပတ်က ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာ စာတမ်းတစ်စောင် ဖတ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ စာတမ်းဖတ်ပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းသူကတော့ ရဲချုပ် (ငြိမ်း) ဦးဇော်ဝင်း၊ သူနဲ့ကျွန်တော်က ဒုတိယသမ္မတ(၁) ဦးမြင့်ဆွေ ဦးဆောင်တဲ့ မောင်တောကော်မရှင်မှာ တာဝန်ယူတုန်းက ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တာ။ အခုတော့ သူက အသစ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်မှာ တာဝန်ယူနေတာ။ ကျွန်တော့်ကို စာတမ်းဖတ်ဖို..
တာဝန်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးတာဝန်ကို ဥပဒေနှင့်အညီ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသည်။ ဥပဒေက မည်သို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါသလဲ။ နည်းဥပဒေက မည်သို့လမ်းညွှန်ထားပါသလဲ။ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းများကရော မည်သို့လိုက်နာကျင့်သုံးကြပါသလဲ။ လေ့လာမှတ်သားစရာ၊ ဖတ်ရှုစရာ၊ ရည်ညွှန်းကိုးကားစရာတွေ စုံလင်လှပေသည်။ လက်တွေ့ဘဝနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်ကျင့်သုံးကြပါမည်လဲ။ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်များ၏ လေ့လာသုံးသပ်မှုများကိုလည်း သိရန်မလိုအပ်ဘူးလား။ တာဝန် ..
အဂတိဟူသည် အဂတိအကြောင်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများအကျဉ်းကို ပြီးခဲ့သော အပတ်က ရေးသားတင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ယခုတစ်ပတ်တွင် အဂတိမှုများနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်စပ်ပုံကို လေ့လာတွေ့ရှိရသမျှ တင်ပြအပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာသင်ခန်းစာများ များစွာရှိပါမည်။ သို့သော် လက်လှမ်းမီသမျှသာ တင်ပြပါရစေ။ ..
နိဒါန်း "ဆရာ" "ဗျာ" "ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆရာ" "ရှေ့နေနှင့်ပြန်ကြားရေးပါ" "ကျွန်တော်သိပ်မရှင်းဘူးဆရာ" "ရှင်းသွားအောင်ဖတ်ကြည့်ကြစို့"..
နိဒါန်း "ဆရာ" "ဗျာ" "ဒီတစ်ပတ်ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ်က ဘာလဲဆရာ" "ရှေ့နေနှင့်အမှုတွဲပါ" "ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ ဆရာ" "ဖတ်ကြည့်ဗျာ" အမှုတွဲ ရှေ့နေဘဝ ကျင်လည်ခဲ့ရသော အချိန်က အမှုတစ်မှု စတင်လိုက်ပါတော့မည်ဆိုလျှင် ဘာတွေ ကြိုတင် ပြင်ဆင်မည်လဲ။ ဘာအမှုလဲ။ ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာက စရသည်။ အမှုသည်ကလွှဲမှ ကိုယ့်တာဝန် ရှိသည်။ လွှဲစာမရှိက ဘာမျှမလုပ်ရ။ ပထမသတိပြုရသည့် သင်ခန်းစာ။ ပြီးမှ တံဆိပ်ခေါင်းကပ်..
နိဒါန်း "ရှေ့နေ" တာဝန်မှ "အဂတိတိုက်ဖျက်ရေး" တာဝန်သို့ ပြောင်းလဲထမ်းဆောင်ရသည်။ လုပ်ငန်း သဘော သဘာဝချင်းမတူ။ နယ်သစ်၊ ပယ်သစ်၊ တာဝန်သစ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်တာဝန် လည်း ဖြစ်သည်။ အမှားမဖြစ်စေရ။ အားသစ်မွေးမှ။ သတိထား ကြိုးစားရမည့် အလုပ်တာဝန်။..
တားဆီးကာကွယ်ရေး Latest News UNCAC Review Articles Announcements Receiving Complaint Letter International Meeting Education Order Acting Condition of Complaint Letter Amendment Law Asset Declaration Form Chairman Speech MOUs Notice Taking Actions Training Workshop ပြည်ပအစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု လက်ခံတွေ့ဆုံမှု
ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်မှု မြှင့်တင်ရေး ပညာပေးအစီအစဉ်(အလယ်တန်းအဆင့်) ဆရာကိုင်စာအုပ် ပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနား ပြုလုပ်ခြင်း
Anti-Corruption Commission © 2020